» आठौं महाधिवेशनमा ओली र म एउटै समूहबाट लडे पनि दुवै हार्‍यौं, यसपटक म उहाँलाई अध्यक्षमा छाड्दिनँ : भीम रावल
– तपाईको उम्मेदवारी किन रु तपाई किन केपी ओलीको विकल्प ?
मैले कुनै व्यक्तिको विरोधभन्दा पनि मेरो १२ वटा लक्ष्यरउद्देश्य र १५ वटा मान्यताका आधारमा यो पार्टीलाई नेतृत्व गर्न अत्यावश्यक भएको देखे । राष्ट्रिय, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, समृद्धिको दिशामा देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले त्यसको नेतृत्व गर्न म अग्रसर भएको छु ।
-उम्मेदवारी घोषणापछि पार्टी पंक्ति, नेता कार्यकर्ताबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभएको छ ?
-तपाईंको उम्मेदवारीमा अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्रिया केही पाउनुभएको छ ?
-उहाँले उम्मेदवारी दिनेले परिणामको ख्याल गर्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ नि ?
होइन परिणाम त उम्मेदवारी हुँदा सबैले पहिले भन्न सक्दैन । उहाँ हामीले धेरै चुनाव लडेका छौं । हारेका छौं । जितेका छौं । अब पहिल्यै कसको परिणाम के आउँछ भनेर मानापाथी भरेर उम्मेदवारी दिने कसले गरेको छ रु आठौं महाधिवेशनबाट उहाँ र म एउटै समूहबाट लडेको हो । दुइटै हारेको हो । अब यो मानापाथी भरेजस्तो हुँदैन । राजनीतिक मान्यतामा, आफ्ना विचारमा, आफ्नो कार्यक्रम नीतिमा उभिएर दृढतापूर्वक उम्मेदवारी हुन्छ ।
-तपाईको उम्मेदवारी बार्गेनिङका लागि हो भन्ने विश्लेषण पनि छ । अध्यक्षबाहेक सबै पदमा सर्वसम्मत भयो भने के गर्नुहुन्छ रु अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ ?
-भनेपछि यो सम्भावना छैन ?
-तपाई अध्यक्ष हुनुभयो भने पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ ?
मेरा १२ वटा उद्देश्यरलक्ष्य र १५ वटा मान्यताका आधारमा यो राष्ट्रलाई आफ्नो खुट्टामा उचिन सक्ने, आफ्नोबारेमा आफै निर्णय गर्न सक्ने, पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीबाट कूटनीतिबाट सञ्चालन गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवादअन्तर्गत जे कुरा भनेका छौं ती कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौं ।
-अन्तिममा महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?